Maqaal::Xiisada Deni iyo Axmed Karaash, – KHAATUMO NEWS
Maqaal::Xiisada Deni iyo Axmed Karaash,
Dad badan ayaa leh Axmed Karaash muu iska ahaado malxiis edeb badan oo adeegiisa iska gurubsado, maadaama dastuurka Puntland la tashi u ogol yahay waliba lagu diidi karo, dadka qaar baaba gaadhsiiyey qof ayuu diidan yahay dhinaciisa ka soo jeeda, dadka qaarna waxayba leeyihiin shalay ayuu madaxweyne ku xigeenkii ka horeeyey markay is qabteen Gaas , oo uu garab istaagay Gaas.
Horta haddii shalay uu Cabdixakiim ka hiiliyey waa nabsigii diinku wadi jiray oo hadda diyaarad saaran, waana arrin ay tahay in ay dhammaan siyaasiyiinta ka soo jeeda SSC ee martida ku ah Garoowe ogaadaan in ay goobta ku joogaan markasta xilal madhan.
Arrin kale ayaa ka maqan dad badan oo xilliyadii danbe la soo qabsaday dhacdooyinka mandaqada, ama ilaaway dhacdoooyin badan, waxaa guul ah in Karaash warqad ka soo saaro arrin uu diidan yahay isla markaana qof uu diidan yahay ganafka ku dhufto, sababtoo ah kuwii ka horeeyey badankoodu way gununuci jireen, waxay diidan yihiin warqad sidan oo kale ah in ay qoraan kumay dhici jirin, marka laga reebo Maxamed Cabdi Xaashi.
Waxaan xasuustaa Cabdilaahi Yuusuf iyo Maxamed Cabdi Xaashi oo arrimo badan isku qabtay, khilaafkii marka uu sidan u soo baxay ayaa BBCdu waraysatay Maxmed Cabdi Xaashi wuxuu yidhi maalintuu safarka ka soo noqday Cabdilaahi Yuusuf balaayo noogama horayn.
Axmed Karaash in inta yar ee Dastuurku u ogolaanayo ee la tashiga ah haddii lala baal maro in uu is muujiyo xaq ayuu u leeyahay qofkuu doono haddiidee, waxayna muujinaysaa wali in ay Karaamo ku jirto.
Waxaase xaqiiqo ah in Puntland u baahan tahay in dib laysugu noqdo oo shirweyne laysugu yimaado kii lagu aasaasay oo kale ah, dhawr qodobna wax looga qabto kuwaas oo ah.
2.Sii wajoogida beelaha markii hore ku midoobay samaynteedii oo beelana waa ku tanaadeen, beelana dhaawacyo siyaasadeed ayaa ku soo gaadhay, sidaasi daraadeedna Puntland-ta maanta siyaasad ahaan u jirta la kala diro oo loo kala qaybiyo Puntland Bari iyo Puntlandta waqooyi, oo intii SSDF iyo waxay israaci karaan dhinac laysugu didiyo, qolyihii USP ee ku khasaaray Puntland-na talo isugu noqdaan, goobtana laga saaro 17 xildhibaan Afarta wasiir iyo Madaxweyne ku xigeenka sawirka ah.
Inta ka horaysa waxaan kula talin lahaa Axmed Karaash in aanu noqon malxiis isha ka eega qaabka loo ciyaarsiinayo gabadha quruxda badan ee Cabdiwali Gaas sheegay in ay tahay mid ayaan daran oo marba uu guursado mid aan u qalbin, wuxuuse ka ilaaway Cabdiwali in markasta malxiis dhufaanan oo aan dareen lahayni lagu lifaaqo madaxweynaha aan u qalmin Gabadha Puntland ah.
Previous Post: Deg Deg:Kismaayo Oo Lagu Kala Adkaaday iyo Kenya Oo Jawaab Siisay James Swan
Next Post: Deg Deg Daawo:Buuhoodle Laga Furay Hotel Casri Ah,